सेक्स गर्नुभन्दा अगाडी भुलेर पनि झुक्किएर पनि नफेर्नुहोस् पिसाब ! « aamsanchar.com , aamsanchar
सेक्स गर्नुभन्दा अगाडी भुलेर पनि झुक्किएर पनि नफेर्नुहोस् पिसाब !
यौन सम्पर्क मानव जीवनको लागि निकै महत्वपूर्ण छ । तर यसलाई सुरक्षित र हानीरहित बनाउनु अझै त्यो भन्दा बढि महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
यौन मानिसको एउटा अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न वा यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो सावधानी अपनाउँदा ठूलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । सामान्य लाग्ने लापरवाहीले पनि हाम्रो शरीरमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्दछ । आज हामी तपाईहरुलाई कुनै पनि समय शारिरिक सम्बन्ध राख्नु अगाडी पिसाब फेर्दा हुन सक्ने संक्रमण बारे जानकारी दिन जाँदै छौँ।
शारिरिक सम्बन्ध राख्नु भन्दा अघि पिसाब फेर्ने गर्दा महिलाहरुको स्वास्थ्यनै जोखिममा पर्न सक्ने एक विशेषज्ञले बताएका छन्। उनका अनुसार महिलाहरुमा हुने हनिमुन सिष्टिसिस नामक मुत्रनली सम्बन्धी रोगको प्रमुख कारण सेक्स गर्नुअघि पिसाव फेर्नु हो ।ब्याक्टेरियामा सुक्ष्म अंकुश हुन्छ र त्यसले उसलाई मुत्रनलीको तहमा टाँसिन मद्धत गर्ने पनि उनले बताए। तर शारिरिक सम्बन्ध पश्चात पिसाब फेर्नु भने धेरै फाइदाजनक हुने गर्छ।
मुत्रनलीमा हुने संक्रमण वा घाउको मुख्य कारण यौन सम्पर्क गर्नुअगाडि पिसाब फेर्नु भएको कुरा वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् । यसको वैज्ञानिक कारण छ । यौन सम्पर्कका क्रममा हाम्रो मुत्रनलीमा विभिन्न व्याक्टेरिया उत्पन्न हुने गर्दछन् ।
यस्ता व्याक्टेरियाका कारण मुत्रनलीमा संक्रमण वा घाउ हुने गर्दछ । तर यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेरियो भने यौन सम्पर्कपछि पिसाब फेरिदैन । जसका कारण मुत्रनलीमा जम्मा भएका व्याक्टेरिया त्यहीँ रहन्छन् । यसकारण पनि यौन सम्पर्क गरेपछि मात्रै पिसाब फेर्दा राम्रो मानिन्छ जसले गर्दा मुत्रनलीमा भएका व्याक्टेरिया पिसाबसँगै बाहिर निस्कछन् ।